FIFA oo go’aan cad kasoo saartay kullamada La Liga ee dibadda lagu soo ciyaarayo. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
FIFA oo go’aan cad kasoo saartay kullamada La Liga ee dibadda lagu soo ciyaarayo.
Sabti, October, 27, 2018(HNN) Xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa meesha ka saaray qorshaha La Liga ee ku aaddan in kullamo lagu soo ciyaaro bannaanka dalka Spain, iyadoo sheegtay in waajib ay tahay in gudaha dalka lagu ciyaaro.
Golaha FIFA ayaa subixii Jimcaha kullan yeeshay iyagoo ka dooday qorshaha horyaalka Spain ee uu hormuudka u yahay Javier Tebas.
Horyaalka Spain ayaa doonayay in kullanka Girona iyo Barcelona dhex mari doona bisha January 26-keeda lagu soo ciyaaro magaalada Miam ee carriga Mareykanka, maadaama ay heshiis 15 sano ah la galeen entertainment company Relevent Sports.
“Waxaan si cad uga soo horjeedaa qorshahan, waxaana dafirsanahay inaan fasaxay kullanka Girona iyo Barcelona ee Miami” ayuu yiri Infantino.
“Ciyaaraha rasmiga ah ee horyaalka waa in lagu ciyaaraa gudaha dalka lagu ciyaari jiray, Golaha arrintan wey caddeeyeen” ayuu carrabka ku dhuftay madaxweynaha FIFA.
Labada koox ee reer Catalan ayaa aqbalay fikraddii ahayd in ay Miami kusoo ciyaaraan, hase ahaatee ururka ay ku mideysanyihiin xiddigaha La Liga ka ciyaara ayaa ka dhiidhinayay qorshahaas iyo sidoo kale Real Madrid.
FIFA oo go’aan cad kasoo saartay kullamada La Liga ee dibadda lagu soo ciyaarayo. added by admin on 27/10/2018